Cayaartooy Madaxa Iyo Gacmaha Ka Jaray Dad Rayid Ah Si Ay Hadiyado Uga Dhigtaan - iftineducation.com
iftineducation.com – Mid ka mid ah qisooyinkii ugu murugada badnaa ee dunida guudkeeda ayey ahayd, kaddib markii koox kubadda cagta ciyaaraysay oo ka tirsan ciidanka waddanka Maraykanka ee ku sugan Afkaanistaan ay tegeen garoon, kaddibna ay isku qaybiyeen laba kooxood, halkaas oo kooxdii badisay ay u waayeen hadiyad ay siiyaan.
Ciidamadan Maraykanka ah ee kubadda ciyaarayey ayaa markii ay waayeen koobab ay is guddoonsiiyaan, waxay soo qabqabteen dad rayid ah oo u dhashay waddanka Afkaanistaan oo marayey meel u dhow garoonka ay ku ciyaarayeen, kaddibna inta ay madaxa iyo gacmaha ka jareen ayey isku guddoonsiiyeen hadiyo, halkaas oo damaashaad iyo farxadna ay isku tahniyadeeyeen.
Warkan oo uu qoray wargeyska The Guardian ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska, askartan oo ay tiradoodu dhamayd 12, ayaa shan ka mid ah la taagay maxkamad iyadoo loo haysto inay kurka ka jareen saddex nin oo u dhashay waddanka Afkaanistaan, isla markaana ay gacmahooda iyo madaxooda hadiyad uga dhigeen ciidankii kale ee ciyaarayey.
Falkan oo dhacay sannadkan gudihiisa, ayaa toddoba askari ee kale oo ahaa ciyaartoygii guushu raacday ee hadiyadaha la guddoonsiinayey iyo kuwo taabacsanaa in madaxyada dadka iyo hilbahooda koob looga dhigo, ayaa ay maxkamaddu ku eedaysay inay qariyeen dilka badheedhka ah ee asxaabtoodu fuliyeen, isla markaana ay raali ka ahaayeen wixii dhacay.
Wargeysku waxa uu warkiisan ku sheegay in falkani ka dhacay gobolka Qandahaar, bilihii koowaad iyo labaad ee sannadkan, isagoo sidoo kale taxay dhacdooyin kale oo naxdin leh oo ay ciidamada Maraykanku u geysteen dad rayid ah, kuwaas oo uu ku jiro nin lagu qasbay in uu kor u qaado bamboo qarxaysa iyo falal kale oo xasuuq ah.